Budgie Desktop inofamba kubva kuGTK kuenda kuEFL kubva kuChiedza chekujekesa | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura vagadziri veiyo Budgie desktop nharaunda vakaita kuti zvizivikanwe kuti vakaita sarudzo yekubva kureraibhurari yeGTK uchifarira Enlightenment Foundation Library (EFL).
Ichi inokodzera iyo inotaura izvo zvinosuruvarisa, GTK4 haina kurarama maererano nezvaitarisirwa kubva kune vanogadzira, kusvika kuzvimwe kunze kwekuti iyo nzira inoenderera inongotarisa pane zvinodikanwa zveiyo GNOME chirongwa, Vagadziri vavo vasingateerere kune dzimwe nzira dzemamwe mapurojekiti uye vasingade kutora zvavanoda.
Iko kukurudzira kukuru kutiza kubva kuGTK Kwaive kurongwa kweGNOME kushandura mashandiro ainoita nematimu, Zvichiita kuti zvive zvakaoma kugadzira misoro yetsika muzvirongwa zvechitatu-bato. Kunyanya, chimiro cheshongedzo chepuratifomu chinopihwa neraibadaita raibhurari, iyo inosunganidzwa netema Adwaita.
Vatatu-bato vanogadzira avo vasingade kuteedzera zvizere iyo GNOME interface vanofanirwa kugadzirira maraibhurari avo kubata maitiro, asi mune iyi nyaya, pane musiyano mukugadzirwa kwezvishandiso zvinoshandisa imwe raibhurari uye raibhurari yemusoro wepuratifomu.
Saizvozvo, ivo vanotaura zvakare kuti hapana yakajairwa nzira yekuwedzera mamwe mabasa ku libadwaita, uye kuyedza kuwedzera iyo yekurangarira API, izvo zvinogona kufambisa shanduko yemavara muzvishandiso, haigone kuyananiswa nekuda kwekunetseka kuti dzimwe nyaya pamusoro peAdwaita, vanogona kukanganisa hunhu hweGNOME kunyorera uye kuomesa kuongororwa kwematambudziko evashandisi.
Naizvozvo, mamwe maumbirwo edesktop anonamira kune iyo Adwaita theme.
Pakati pe lIyo GTK4 Zvimiro Zvausingade kune vanogadzira Budgie, kubviswa kwemukana wekuchinja mamwe majeti nekugadzira zvidimbu, kuchinjisa kuchikamu chechinyakare X11 APIs iyo isingaenderane neWayland (semuenzaniso, muBudgie, mafoni GdkScreen uye GdkX11Screen yaishandiswa kuona kubatana uye kuchinja marongero ekutarisa), matambudziko nekutsikisa muwijeti GtkListView uye kurasikirwa kwekugona kubata mbeva uye keyboard zviitiko muGtkPopovers kana iyo hwindo iri kunze kwekutarisa.
Tichiyera zvayakanakira nezvayakaipira kuchinja kune mamwe matekitchen, ivo vanogadzira vakagumisa kuti chakanyanya kunaka shanduko yeprojekti kuenda mukushandiswa kwemaraibhurari eEFL.
Shanduko kuQt yakaonekwa seinonetsa nekuda kwekubatanidza raibhurari iyi muC ++ uye kusava nechokwadi mune ramangwana rezinesi rezvemitemo. Mazhinji kodhi yekodhi yaBudgie yakanyorwa muVala, asi mimwe mitauro yakaita seC kana Rust yaibvumidzwa senzira dzekutama.
Nezve kugoverwa kwe Solus, chirongwa ichi chichaenderera nekuumba imwe kuvaka zvichibva paGNOME, asi ichi kuvaka ichaiswa mucherechedzo seusingatariswe neprojekti uye ichagoverwa kune chakasiyana chikamu pane peji rekurodha pasi.
Sechiyeuchidzo, iyo Budgie desktop inopa yayo yeGNOME Shell kuitiswa, mapaneru, maapuro, uye yekuzivisa system. Kugadzirisa windows, iyo Budgie Window Manager (BWM) inoshandiswa, inova yakagadziriswa nongedzo yeiyo yekutanga Mutter plugin. Budgie inoenderana nepaneru yakafanana nesangano rebasa kune echinyakare desktop desktop. Ese mapaneru epuratifomu maapplet, achikubvumidza kuti ushandure zvakaringana kuumbika, chinja nzvimbo uye kutsiva kuitiswa kweakanyanya mapaneru zvinhu kune kwako kufarira.
Mhedzisiro mhedzisiro inozopihwa muBudgie 11. Kunyanya, uku hakusi kwekutanga kuyedza kusimuka kubva kuGTK sezvo muna 2017 chirongwa chakatoita sarudzo yekuchinja kuenda kuQt, asi gare gare chakagadzirisa zvirongwa izvi netariro kuti mamiriro ezvinhu achachinja muGTK4.
Mushure mekusunungurwa kwaBudgie 11, vagadziri vanozoongorora kugona kwayo vachipesana neGNOME Shell uye vozofunga kuramba vachivaka chivakwa neGNOME kana kurega kupa zvishandiso zvekutama kuti uvake kubva kuBudgie 11.
MuSolus kuunganidzwa pamwe neBudgie 11 desktop, zvakarongwa kuongorora kuumbwa kwezvikumbiro, kutsiva izvo GNOME kunyorera neanalogog, kusanganisira izvo zvakagadzirwa mukati meiyo projekiti. Semuenzaniso, iri kuronga kugadzira yayo yega yekuisa nzvimbo yekuisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Budgie Desktop inofamba kubva kuGTK kuenda kuEFL kubva kuChiedza chekujekesa
oneko: kana maitiro ekuita chipfuwo pane yako GNU / Linux